May 2014 ~ SAI SENG SERK
8:52 AMSHAN POEM No comments
ꨟူမ်ꨳꨅူမ်းꨟပ်ꨵတွꨓ်ꨳပီꨳꨓွင်ꨵတꨯးꨟဝ်းေꨀုꨵꨡꨓ်ꨟꨀ်ꨵ လိꨀ်ꨳꨅိူဝ်ꨵꨁိူဝ်းတꨯးꨟဝ်း ꨀူꨳꨅဝ်ꨳꨀူꨳပုးယူꨲꨁုꨳ။မ်ꨮꨲသုင်ꨁုꨳ ꨵ ꨵ
ငိꨓ်းꨅူမ်း မုးပꨓ်ꨟꨰင်းꨁုꨳꨟဝ်းꨁုꨳ မ်ꨮꨲသုင်ꨁုꨳ။
3:07 AMMYOPINION No comments
ကျွန်တော်တို. ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသည် လူမျိုးပေါင်းစုနှင်. ပေါင်းစပ်ပြီးနေတဲ.နိုင်ငံဖြစ်ပါ
သည်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် လူမျိုးမခွဲခြားပဲ Justice and Equal ဖြစ်ဖို.လိုပါတယ်တကယ်တမ်းပြည်
ထောင်စုကြီးဆိုတာ ဗမာမပာာလူမျိုးကြီး အစိုးရပဲ ပိုင်တာမပာုတ်ပါဘူး တိုင်းရင်းသားတွေလဲပိုင်
ပါတယ် ဒီချိန်မှာ ကျွန်တော်တို. ညီအစ်ကိုယ် အချိန်ရှိ သွေးစည်းဖို.လိုနေပါပြီ။ Nation Agree
အမျိုးသား ရင်.ကြားစေ. ဖို.လိုနေပါပြီ။ ကျွန်တော် ဗမာအစိုးရတပ်မတော်ကိုတောင်းဆိုချင်တာ
တစ်ခုရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို. ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာကို ချက်ချင်း
ရပ်လိုက်ပါ။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုးတာလဲ အတူတူပဲ ခံရတာတွေလဲ အတူတူပဲ။ တိုင်းရင်းသားဖက်
တိုက်ပွဲမှာ ကျဆုံးတာလဲ ပြည်ထောင်စုသားပဲ ဗမာဖက်ကကျဆုံးသွားတာလဲ ပြည်ထောင်စုသား
ပဲ အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်မယ်.အစား တန်းတူညီမူနဲ. Federal စနစ်ကို ကျင်.သုံးပြီး အေးအတူပူ
မျှနဲ. အတူတူနေသွားရင် Asia မှာ ငါတို.နိုင်ငံသစ်တည်ထောင်ရမှာပေါ.။အခု ကချင် တအောင်း
ရှမ်း နဲ. ကိုးကန်တို.ကို အစိုးရက Offensive လုပ်မယ်.အစား တိုင်းရင်းသားတွေတောင်းဆိုနေတဲ.
စစ်မှန်တဲ. ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်နဲ. Federal မူကို လိုက်လျောပေးလိုက်ရင်လဲ အစိုးရဖက် ဘာမှ
အခွင်.အရေးမဆုံးရှူံးသွားပါဘူး။ ကျွန်တော်တို. တိုင်းရင်းသားတွေ တိုင်းရင်းသားတိုင်းပဲ ယိမ်းငွေ.
ကို ငြီးငွေ.နပြီ။ နှစ်ပေါင်း ခြောက်ဆယ် ပြည်တွင်း စစ်ဖြစ်လာတာ ဘယ်သူမှမနိုင် ဘယ်သူမှ မဆုံးရှူံး
ဘူး ပြည်တွင်းထဲက သယံဇတတွေ သစ် ပစ္စည်းတွေ ဆုံးတာပဲအဖတ်တင်တာ နောက်ဆုံးကျွန်
တော်တို. လူမျိုး ပြည်ထောင်စုသားတွေပဲ ဒုက္ခရောက်တာ ကျွန်တော်တို. တိုင်းရင်းသားတိုင်းလဲ
လက်နက်ကိုင်တယ်ဆိုတာ အစိုးရ ဗမာအစိုးရတာ ပင်လုံအတိုင်း ပြည်ထောင်စုစစ်စစ် ကျင်.သုံး
ကြည်.ပါလား ကချင် ရှမ်း ချင်း လက်နက်ကိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။အခုလက်နက်ကိုင်တာပာာ
သူပုန် သောင်းကျန်းတာမပာုတ်ပါဘူး ကိုယ်ပိုင်ရပိုင်ခွင်.နဲ. ကိုယ်ပိုင် ပြငှာန်းခွင်. ကိုပဲတောင်းတာ
နေတာပါ။လက်နက်ကိုစွန်.ပြီး တပ်မတော်လက်အောက်မှာနေရမယ်ဆိုတော်လဲ ကျွန်တော်တို.
တိုင်းရင်းသားတွေ တောင်းဆိုနေတဲ. Federal မူတွေ တန်းတူညီမျှမရှိနေတရွှေ.ဘယ်လိုမှ မဖြစ်
နိုင်သေးပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားတွေကို လက်နက်ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် စစ်တိုက်ဖို. ထိုးစစ်ဖို.လုပ်စ
ရာမလိုပါဘူးခ။ နှစ်ဖက်စလုံး သေကြေမူမရှိအောင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှာလဲဆိုတာ အဖြေရှိပါ
တယ် မခက်ပါဘူး တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင် အဲဒါကတော. တိုင်းရင်းသား၏ ဘာသာ ယဉ်ကျေးမူ
နဲ. စာပေ ကိုယ်ပိုင်ပြငှာန်းခွင်. တန်းတူညီမူကိုပေးလိုက်ရင် ဗမာအစိုးရက ငါတို.စီ လက်နက်လာ
အပ်ပါလို. ပြောစရာတောင်မလိုဘူး ကိုယ်.အသိနဲ.ကိုယ်.ပာာကို The Union Federal Army
ဖြစ်သွားမှာပဲ။ အစိုးရတာ နည်းမသိပဲနဲ. စစ်ရေးကို တိုင်းရင်းသားကို ဖိအားလာပေးနေတရွှေ.
တော. တိုင်းရင်းသားဆိုတာလဲ ပပျောက်သွားမှာမပာုတ်ပါဘူး လူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်း အင်အား
တောင်ပိုပိုကြီးလာမှာပဲ။အခုချိန်ပာာ ကျွန်တော်တို.တိုင်းရင်းသား နဲ. ဗမာအစိုးရတပ်မတော်
တွေ စည်းလုံးရမယ်.အချိန်ရောက်နေပါပြီ။ ကချင် ကယား မွန် ဗမာ ရခိုင် ချင်း ရှမ်း ကရင်
တိုင်းရင်းသား အားလုံး စည်းလုံးညီညွတ် အမျိုးသား ရင်.ကြားစေ. ကိုဦးစားပေးပြီးလုပ်ဆောင်
သွားရင် တစ်ချိန်ကြရင် ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံပာာ ရွှေနိုင်ငံဖြစ်သွားမှာပဲ။အခုဒီလိုမပာုတ်လို.အစိုး
ရဖက်က ဂျပန်မှာ နိုင်ငံခြားတွေစီမှာတောင် ပိုက်ဆံချေးပြီးသုံးရတာဆိုတာ အရမ်းကိုမျက်နှာ
ငယ်ပါတယ် တိုင်းရင်းသား ပြည်ထောင်စု ထဲကထွက်တဲ. ပစ္စည်းတွေကအများကြီး အဖိုးတန်တဲ.
အရာတွေပါပဲ။ ဘာလို. လူမျိုးနိုင်ငံစီကနေ အကြွေးတင်နေရတာသလဲ ပြည်တွင်းစစ်မှာ အသုံး
စာရိတ်အရမ်းများသွားလို.ပေါ. ကချင်အရေးဆိုရင် ပြောစရာမလိုတော.ဘူး အစိုးရဘယ်လောက်
အသုံးစာရိတ်များသွားပြီလဲဆိုတာကို။ ဘယ်လိုနည်းနဲ.ပဲဖြစ်ဖြစ် တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုယ်တွေ
ပဲ စည်းလုံးပြီး ပြည်ပကိုအတူတူ ရန်သူကိုကာကွယ်ပေးပါ ပြည်ထောင်စု ပြည်သားတွေကိုကူ
ညီ ကာကွယ်ပေးပါ သူတို.၏ အိုးအိမ် ဘိုးဘွား ပစ္စည်းတွေကို ကာကွယ်ပေးပါ။အခုဆိုရင် ရခိုင်
ပြည်က ဖြစ်တဲ. ပြသာနာသည် တစ်နေ.ပြီးတစ်နေ.ကြီးကြီးလာတာ အခုဆိုရင် ဘင်္ဂလားနဲ. ရဲ
သား စစ်ဖြစ်နေချင်ပါပြီ။ဒါပာာ ကျွန်တော်တို. နိုင်ငံကို သူတို. ဥပဒေကိုမလေးစားလို. ပြီးတော.
ကျွန်တော်တို. ပြည်ထောင်စုသားကို အထင်မကြီး လုပ်ချင်သလိုလုပ်သူတို. ငါတို.လူမျိုးကိုလဲ
မလေးစားဘူး သတ်ဖြတ်တယ်။ ဒါပာာ အစိုးရဖက်ကလဲ တာဝန်ရှိပါတယ်။ဘင်္ဂလား လူမျိုးသည်
ကျွန်တော်တို. ပြည်ထောင်စုသားတွေကို သတ်ဖြတ်တာ လဲမနည်းဘူး။အခုလဲ ဖြစ်ပြန်ပြီဒါပာာ
ထိထိရောက်ရောက် တပ်မတော်ဖက်က အရေးယူပေးစေချင်ပါတယ် တကယ်တမ်းဒီနေရာမှာ
ငါတို. တိုင်းရင်းသားတွေ စည်းလုံးညီညွတ်ကြည်.ပါလား ဘယ်သူ.မျက်နှာကြည်.စရာမလိုဘူး
ကိုယ်.မျက်နှာကို မော.ပြီးနေနိုင်သေးတယ်။အခုပာာက မပာုတ်ဘူး လူများနိုင်ငံကိုယ်.ကို လုပ်
ချင်သလိုလုပ် သိမ်ပိုက်ချင်သလိုသိမ်းပိုက်။ ဗမာတပ်မတော်အခု ကချင်တို. ရှမ်း တအောင်းတို.
ထိုးစစ်နေတဲ.လူတွေကို ဘင်္ဂလားဖက်မှာ ပြန်သယ်လာပြီး နေရာချထားပေးပါလား။ဘယ်သူမှ
မခိုးဝင်လာရဲ.ဘူး တကယ်တမ်းတာ အစိုးရတပ်မတော် ကောင်းခဲ.ရင် ပြည်ထောင်စုထဲမှာ တရုတ်
ကုလား ရှိလာစရာအကြောင်းမရှိဘူး အခုပာာက လူများလူမျိုး တရုတ် ကုလားက မတရားချမ်းသာ
တာ ပြည်ထောင်စုသားတွေကြတော. မတရားဆင်းရဲမွဲသေတာ အရေးထဲ ထမင်းတစ်နပ်စာကို
လျှော.စားခိုင်းလိုက်သေးတယ်။ ကျွန်တော်တို. တိုင်းရင်းသားတွေကြတော. သေနတ်နဲ.သတ်ဖြတ်
ချကြတာ လူများလူမျိုးကြတော. လူမျိုးရေးနဲ. ငါတို. ပြည်ထောင်စုသားတွေကို မြိုနေတာ။အဲကြောင်.
ဒီစာကို လူကြီး ၀န်ကြီးအပေါင်းတို.သိစေချင်ပါတယ်။
Markets, overflowing with exotic fruits and vegetables and run by women, are an integral part of Myanmar. In the Shan State, community markets are held onarotating basis in which each town or village withinagiven area hostsamarket day every five days. Don't miss the thriving cattle market in Heho, the famous floating market at Inle Lake or the colourful market at Kalaw where the Shan tribes sell their fruits and vegetables.
INLE LAKE Spendaglorious day onamotorized boat exploring the area of Inle Lake, the world's highest floating market. Pass floating flower and vegetable gardens of the Intha tribes and watch as the "One leg rowers" pull up their nets from the cool, clear emerald green waters below. Watch the silk weavers and blacksmiths at their work. Plenty of time to stroll around the compound of the Phaung Daw Oo Pagoda, where you can find stalls offering Shan handicrafts, so-called antiques, silk and cotton longyis and the popular brightly coloured Shan cotton bags. In September and October the biggest festival takes place at Phaung Daw Oo Pagoda.
PINDAYA Spend some time at the charming village of Pindaya with its cave containing thousands of Buddha images and its umbrella cottages.
KALAW As it had beenapopular hill station for the British during the colonial days, it still isapeaceful and quiet place with an atmosphere reminiscent of the colonial era. The small population isapeculiar mix of Shan, Indian Muslims, Burmans and Nepalese. Kalaw is the starting point for the journey to exciting
TAUNGGYI Taunggyi, the capital of Shan State, hasasmall but exiting ethnographic museum devoted to the many tribes of the Shan State. The best time to visit Taunggyi is for the yearly Balloon Festival in November which definitely is THE highlight in Taunggyi!
TREKKING TOURS IN SHAN STATE From one-day return excursions up to4days of hiking and3nights sleep in monasteries in Pindaya and Kalaw areas, you can experience the daily life of the Shan tribes! Pao, Padaung, Taung Yoe and Danu people will welcome you.
TACHILEK Onlyaone hour flight from Heho and justaborder town next to Mae Sai in Northern Thailand, it is actually only important for many Myanmar people who daily cross the border bridge to Mae Sai for work or doing business and then hurry back by sunset. GMT brings you to Tachilek for the purpose of letting you enjoyabumpy7hour car ride to Khentung, as on the way you will visit lots of places where colourful hill tribes live inacompletely different kind of natural life compared to any other place in Myanmar.
KHENTUNG Maymyo, Kalaw, Ngapali - the British definitely knew where to find the nicest spots during their colonial regime... During this time they built the town around the picturesque Naung Tong Lake, near the Pyin Monastery. There are not only wonderful temples, monasteries and old catholic churches to be marvelled at, but hiking to the nearby Akha, Am , Lahu or Lisu villages that will bring you back into ancient Asian times...
Lashio The mountainious regions around Lashio, an important trading center, can be reached by train or road from Mandalay. Attractions here include beautiful scenery and hot springs, as well as the town's lively market.
Get From >>> SSDArmy
12:21 PMSHANHISTORY No comments
ကုန်သည်အိမ်များတွင် ပလွေမှုတ်ခြင်း၊ လေချွန်ခြင်း မပြုလုပ်ရ။ လာဘ်တိတ်တတ်သည်ဟုယူဆကြသည်။ ဇီးကွက်များ ရပ်ရွာတွင် အော်မြည်ပါက နှာစေး ချောင်းဆိုးဖြစ်တတ်သည်။ အိမ်ရှင်ခွင့်မပြုပဲ ယောကျာ်း၏ သီးသန့်နေရာသို့ မသွားရ။ အိမ်ပေါ်တက်လျှင် ဖိနပ်ချွတ်ရသည်။ ကျွေးမွေးဧည်ဝတ်ပြုသော အစားအစာ၊ လက်ဖက်ရည်များကို စားသုံးမှ သဘောကျသည်. မစားပဲနေလျှင် ရိုင်းစိုင်းသည်ဟု ယူဆကြသည်။ ရှမ်းအမျိုးသားများသည် စီးပွားရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော ရိုးရာဓလေ့များကို ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ယင်းတို့မှာ အထူးသဖြင် လယ်ယာများနှင့် ပတ်သက်သည်။
မိုးဦးကျ လယ်တောဆင်းချိန်တွင် မိုးမမှန်၊ လေမမှတ်ဖြစ်ခဲ့သော် လွန်ဆွဲခြင်း ယုံကြည်ကိုးစားရာ ဘုရား၊ နတ်တို့အား ပူဇော်ပသခြင်း ပြုသည်။ လယ်ယာများတွင် ပိုးမွှားကျရောက်သဖြင် စိုက်ပျိုးထားသော ကောက်ပဲသီးနှံများ မအောင်မြင်သောအခါ မိမိတို့ မကောင်းမှု ပြုလုပ်ခဲ့သောကြောင့် အပြစ်တို့မှ ခွင့်လွှတ်ရန် တောင်းပန်ခြင်း၊ လယ်ယာများတွင် ဖျက်ဆီးအံ့သော မကောင်းမှု အကုသိုလ်များ ပပျောက်ရန် နတ်ပူဇော်ခြင်းများ ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
လယ်ထွန်ခြင်း၊ ကောက်စိုက်ခြင်းများကိုလည်း နေ့ကောင်းနေ့မြတ် ရွေးချယ်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ တော်သလင်းလ ကျော်လျှင် ကောက်မစိုက်၊ စိုက်လျှင် သီးနှံမထွက်ဟု ယူဆသည်။
စပါးများရိတ်သိမ်းပြီးနောက် စပါးတင်းရေ ပိုမိုထွက်ရန် လယ်ကွင်းထဲတွင် မီးထွန်းပြီး ဆုတောင်း ပသလေ့ရှိသည်။ ကောက်လှိုင်းစည်းများ စုပုံပြီး စပါးမနယ်မီ စပါးနှံများကို ပုခိုင်ခိုင်ခေါ် ဘိုးဥကြီး၊ ဘွားဥကြီးဟု အမည်တပ်ထားသော ကြက်ဥပြုတ် နှစ်လုံးနှင့် မုန့်များ တင်သရသည်။
စပါးများကို အိမ်သို့ သယ်ယူသောအခါတွင် လယ်ကွင်း ယာခင်းမျှ အိမ်အထိ လမ်းတစ်လျှောက်တွင် စပါးပုံကလေးများ အနည်းငယ် ပုံချထားလေ့ရှိသည်။ ထိုသို့ ပုံထားခြင်းမှာ ကျေးငှက်သတ္တဝါ အပေါင်းတို့နှင့် ဝေမျှစားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် လမ်းခရီး၌ အစားအစာ ပြတ်သူများအား စပါးရှိသော နေရာသို့ အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်ရန် လမ်းပြအဖြစ် ပုံထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
Get From >>> Shan History
10:04 AMHEALTH No comments
မျက်ကပ်မှန်တပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် မျက်ကပ်မှန်ကို အဆင်ပြေပြေတပ်နိုင်အောင် မျက်ကပ်မှန်ကြောင့် မျက်စိမထိခိုက်ရအောင် ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေးတွေကို ပြောပြမယ်နော်။
- မျက်ကပ်မှန်တွေကို ပူလွန်းအေးလွန်းတဲ့နေရာမှာ မထားပါနဲ့။
- မျက်ကပ်မှန်တွေကို မကိုင်ခင် လက်ကို ဆပ်ပြာအပျော့စားလေးနဲ့ သေချာဆေးပေးပါ။
- အမွှေးမပါတဲ့ပုဝါနဲ့ လက်ကို ခြောက်အောင် သုတ်ပေးပါ။
- ညာဖက်မျက်ကပ်မှန်ကို အရင်ချွတ်ရင် အမြဲညာဘက်ကိုပဲ အရင်ချွတ်ပါ။ ဒါမှ ဘယ်နဲ့ညာ မမှားနိုင်မှာပေါ့။
- မျက်ကပ်မှန်ဆေးရည်ကို သုံးပြီးတဲ့အခါတိုင်း အဖုံးကို သေချာလုံအောင် ပိတ်ပါ။
- မျက်ကပ်မှန်ထည့်တဲ့ဘူးလေးကို နေ့တိုင်းသေချာစင်ကြယ်အောင် ဆေးပါ။
- မျက်ကပ်မှန်ဆေးရည်က ရက်လွန်နေရင် မသုံးပါနဲ့တော့။
- ရေမကူးခင်မှာ မျက်ကပ်မှန်ကို ချွတ်ထားပါ။
- မျက်ကပ်မှန်ကို မိတ်ကပ်မလိမ်းခင် တပ်ဆင်ပါ။ မိတ်ကပ်မဖျက်ခင် ချွတ်ပါ။
- မျက်စဉ်း အမြဲဆောင်ထားပါ။ အထူးသဖြင့် ကွန်ပြူတာအကြည့်များတဲ့ သူတွေမှာပေါ့။ မျက်လုံးအိမ်က ခြောက်သွေ့နေရင် သက်တောင့်သက်သာလည်း မရှိဘူး။ မျက်ကပ်မှန်လည်း ပြန်ချွတ်ရခက်တယ်။ မျက်လုံးကိုလည်း ဒဏ်ဖြစ်စေနိုင်တယ်လေ။
- မျက်ကပ်မှန်ကိုမတပ်ခင်မှာ မျက်ကပ်မှန်ကခြောက်သွေ့နေတယ်လို့ထင်ရင် မျက်ကပ်မှန် ဆေးရည်နဲ့ ဆေးလိုက်ပါ။
- မျက်ကပ်မှန်စမတပ်ခင်မှာ မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ ပြသပါ။ မျက်လုံးမှာ ပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေရင် မျက်ကပ်မှန်တပ်လို့မရဘူးလေ။
- တကယ်လို့ မျက်ကပ်မှန်တပ်ပြီးတော့မှ မျက်လုံးက နာလာမယ်၊ နီရဲလာမယ်၊ ကြည့်ရလည်း လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဆိုရင် မျက်ကပ်မှန်ကို ချက်ချင်းပြန်ချွတ်ပါ။
- မျက်ကပ်မှန်ကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ်ဆိုရင် မျက်ကပ်မှန်ထည့်တဲ့ဘူးထဲကို မျက်ကပ်မှန်ဆေးရည် ထည့်ပါ။
ပြီးတော့ မျက်ကပ်မှန်ကိုထည့်၊ အဖုံးကိုလုံအောင်ပိတ်ပြီး ဖြည်းဖြည်းလေးလှုပ်ပေးပါ။ မျက်ကပ်မှန် မတပ်ခင်နဲ့ တပ်ပြီးတိုင်း လုပ်ပေးနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
- မျက်ခမ်းစပ်၊ မျက်စိစွံတွေ ဖြစ်နေရင် ဓာတ်မတဲ့မှုကြောင့် မျက်လုံးနီရဲပြီး ရောင်နေရင်တော့ မျက်ကပ်မှန်ကို မတပ်ပါနဲ့။
- ဆပ်ပြာတွေ အလှကုန်တွေနဲ့ တခြားအရာတွေနဲ့ မျက်ကပ်မှန်ကို မထိစေနဲ့။
- မျက်ကပ်မှန်ဆေးရည်ဘူးရဲ့ ထိပ်အပေါက်ကို ဘာနဲ့မှ မထိပါစေနဲ့။ လက်၊ မျက်ကပ်မှန်တို့နဲ့တောင် မထိပါစေနဲ့။ မျက်ကပ်မှန်ကို ဘာနဲ့မှ မသုတ်ပါနဲ့။
- သုံးပြီးသား မျက်ကပ်မှန်ဆေးရည်ကိုလည်း လုံးဝပြန်မသုံးသင့်ပါဘူး။
- မျက်ကပ်မှန်ကို ဆေးကြောဖို့အတွက် မျက်ကပ်မှန်ဆေးရည်ကလွဲပြီး ဘာမှမသုံးပါနဲ့။
- ရေနွေးငွေ့တို့ တခြားမျက်စိကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့အငွေ့တို့ ရှိနေရင်လည်း မျက်ကပ်မှန်မတပ်ပါနဲ့။
- မျက်ကပ်မှန်ကို ၈ နာရီထက်ပိုမတပ်မိပါစေနဲ့။
- မျက်ကပ်မှန်တပ်ပြီးတော့ ဆံပင်ဖျန်းဆေး မသုံးပါနဲ့။
- မျက်ကပ်မှန်ကို နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့လည်း မတပ်သင့်ပါဘူး။
- မျက်နှာပြင် ကြမ်းမာနေတဲ့ အနားတွေထက်နေတဲ့ မျက်ကပ်မှန်ကိုလည်း နှမြှောပြီး မတပ်ပါနဲ့။
- မျက်ကပ်မှန်မတပ်ခင် လက်ကို ဆပ်ပြာနဲ့သေချာစင်ကြယ်အောင်ဆေးပါ။
- ပြီးတော့ မှန်ရှေ့မှာ နေပါ။
- ညာဘက်လက်ခလယ်နဲ့ အောက်မျက်ခမ်းကိုဆွဲပါ။
- ဘယ်ဘက်လက်နဲ့ အပေါ်မျက်ခွံကို ဆွဲမပါ။
- တည့်တည့်ကြည့်ပြီး မျက်ကပ်မှန်ကို မျက်လုံးအလယ်တည့်တည့်မှာ တပ်ဆင်ပါ။
- မျက်ကပ်မှန်တပ်ပြီး မျက်တောင်မခတ်ခင်မှာပဲ ဘယ်ညာအရင်ကြည့်ပါ။ အဲလိုကြည့်လိုက်ရင် မျက်ကပ်မှန်က မျက်လုံးအလယ်တည့်တည့်မှာ သေချာနေရာတကျဖြစ်သွားတယ်လေ။
- ပြီးတော့ မျက်ကပ်မှန်က နေရာတကျရှိရဲ့လားဆိုတာ မှန်ထဲမှာသေချာကြည့်ပါ။
-မျက်ကပ်မှန်ဟာ မျက်ဆံပေါ်မှာ နေရာတကျရှိနေပြီး မျက်လုံးကလှုပ်ရှားလည်း ဒီတိုင်းပဲဆိုရင် OK သွားပြီပေါ့။
- မျက်ကပ်မှန်ချွတ်တော့မယ်ဆိုရင် မျက်ခွံတွေကို ပိတ်မသွားအောင် လက်တစ်ဖက်နဲ့ ဆွဲဖွင့်ထားပြီး လက်မရယ် လက်ညိုးရယ်နဲ့ အသာအယာလေးဆွဲယူလိုက်ရုံပါပဲ။
- ပြီးတော့ မျက်ကပ်မှန်ထည့်တဲ့ဘူးကို ဆေးရည်ဖြည့်၊ မျက်ကပ်မှန်ထည့်ပြီး လုံအောင်ပိတ်ထားလိုက်ပါ။
မျက်ကပ်မှန်တပ်နေကြလူတွေအတွက်တော့ မိကျောင်းမင်း ရေကင်းပြသလို ဖြစ်နေမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် ခုမှ မျက်ကပ်မှန်စတပ်မယ်ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ပါ။ ပြီးတော့ မျက်ကပ်မှန် ခုမှ စတပ်မယ့်သူတွေအတွက်ရော၊ တပ်နေကြသူငယ်ချင်းတွေရော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်လေးတွေကို သိနိုင်အောင်ပါ။
9:46 AMHEALTH No comments
မျက်နှာပေါ်မှာပေါက်နေတဲ့ ၀က်ခြံကိုကြည့်ပြီး အရေပြားဆရာဝန်တွေက လူနာရဲ့ 
့ရောဂါကို ဟောကိန်းထုတ်ကြသလို၊ တရုပ် တိုင်းရင်းသမားတော်တွေကလည်း
မျက်နှာအသားအရေနဲ့ ဝက်ခြံကိုကြည့်၍ဆေးကုသရာ ထိရောက်မှုရှိုတယ်လို
့ဆိုကြပါတယ်။ ဒါ “Face Mapping” ကုသနည်းလေးပါတဲ့။
ဒီဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ရှုရင်း မျက်နှာပေါ်က ၀က်ခြံအနေအထားကိုကြည့်ပြီး၊ မိမိ
(၁) နဖူးပြင်ပေါ်က ၀က်ခြံများ။
ဆီးအိမ်နဲ့ အစာချေလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ ပြဿနာတစ်ခုခုရှိနေပါပြီ။ အဲဒီနေ ရာတွေ မှာ မကြာခဏဆိုသလို ၀က်ခြံပေါက်ခဲ့ရင်ရေများများသောက်ဖြစ်ပြီး၊ အာဟာရပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာတွေ ပိုစားပေးရပါမယ်။ (ဆေးသုတေသီတွေရဲ့အဆိုအမိန့် များအရ၊ အမျိုးသမီးတွေမှာ အများဆုံးပေါက်လေ့ရှိတဲ့ နေရာဖြစ်ပါတယ်တဲ့)
(၂) မျက်ခုံးမွှေး ၂-ခု အလည်ခေါင်တဲ့တဲ့က ၀က်ခြံများ။
အသည်းရောဂါနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသည်းကိုထိခိုက်စေမယ့်
အရက်သေစာအမျိုးမျိုး၊ ကစီဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာများ၊ သကြား၊ နို့ မလိုင်၊
နို့ ထောပတ် တွေကို လျော့စားပေးရပါမယ်။
(၃) နားရွက် တွေကို စစ်ဆေးပါ။
နားရွက် ၂-ဖက်စလုံးကလည်း ဘယ်/ညာ ကျောက်ကပ်တွေနဲ့ ဆက်နွယ်မှု ရှိနေကြ ပါတယ်။ အကယ်၍ နားရွက် ၂-ဖက်လုံးနီပြီး ပူထူနေတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အဆိပ် အတောက်တွေများလာပြီမို့ရေသန့် များများသောက်ပေး ရပါမယ်။ အရက်၊ ဆော် ဒါတွေ အပြင် ကဖိန်းဓာတ်များပြားတဲ့ လ္ဘက်ရည်၊ ကော်ဖီတို့ ကို လျော့သောက်ပေး ရပါမယ်။
(၄) ပါးပေါ်က ၀က်ခြံများ။
ပါးပြင် ၂-ဘက်ကတော့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းနဲ့ သက်ဆိုင်နေပါတယ်တဲ့။ အသက် ရှု လမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့ တဲ့ဝေဒနာရှင်တွေ၊ allergies ဖြစ်သူတွေ၊ အသက်ရှု လမ်းကြောင်း တလျှောက် ဆံချည်မျှင်သွေးကြောများ ပျက်စီးနေသူတွေ နဲ့ ဆေးလိပ်စွဲ သူတွေမှာ ပါးပေါ်ဝက်ခြံပေါက်လေ့ရှိပါတယ်။ ပါးရဲ့ အောက်ဘက်မှာဝက်ခြံပေါက်နေ သူများက သွားဖုံးရောင်ဝေဒနာနဲ့ ဆက်စပ်မှုရှိနေပြီမို့ သွားဆရာဝန်နဲ့ ပြ ဖို့ လိုပါတယ်။
(၅) နှာခေါင်းပေါ်က ၀က်ခြံများ။
နှာခေါင်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ နှာတံတလျှောက် ၀က်ခြံတွေက နှလုံးနဲ့ သွေးတိုးရော ဂါဖြစ်ကြောင်းကိုညွှန်ပြပါတယ်။ လက်ရှိသုံးစွဲနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေး/ လိုင်နာ တွေ နဲ့ ဓာတ်မတည့်တဲ့အခါ၊ နှာခေါင်းရဲ့ အောက်ခြေ(သို့ မဟုတ်)အပေါ်နှုတ်ခမ်းရဲ့ အထက်ပိုင်းမှာ ၀က်ခြံထွက်လာတတ်လို့ ၊ နှုတ်ခမ်းဆိုးဆေးနောက် တမျိုး ပြောင်းလဲ ဆိုးပေး သင့်ပါတယ်။
(၆) မျက်လုံးတ၀ိုက်ပေါ်က ၀က်ခြံများ။
ကျောက်ကပ်ဝေဒနာသည်များက နားထင်နဲ့မျက်လုံးပတ်ဝန်းကျင်တွေမှာ ၀က်ခြံ ထွက်လေ့ရှိကြပါတယ်တဲ့။ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် မျက်ကွင်းညိုသူများကိုမဆိုလိုသော် လဲ၊ ရံဖန်ရံခါ(သို့ မဟုတ်)မကြာခဏ မျက်ကွင်းညိုတတ်သူများဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲ မှာ ရေ ဓာတ်ဆုံးရှုံးနေတာကို ဖော်ပြတာကြောင့်ရေများများသောက်ရင်း၊ အရည်ရွှမ်းတဲ့ သစ်သီးတွေစားပေးဖို့ လိုပါတယ်။
(၇) မေးစေ့ပေါ်က ၀က်ခြံများ။
မေးစေ့ နဲ့ မေးဖျားတ၀ိုက်ဝက်ခြံများက ခန္ဓာကိုယ်တွင်းဟိုမုန်းတွေ ဖောက်ပြန်နေပြီ ဖစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပြီး၊ ဓမ္မတာရာသီလာခါနီးကာလတွေ နဲ့စိတ်ဖိစီး မှုများတဲ့သူတွေမှာ ပေါက်လေ့ရှိပါတယ်။ဒါ့ပြင် ၀မ်းချုပ်သူတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အပူ အပုပ်များသူတွေလည်းမေးစေ့ပေါ်မှာ ၀က်ခြံပေါက်တတ်တာမို့အမျှင်ဓာတ်များတဲ့ အစားအစာတွေများများစားပေးသင့် ပါတယ်။
(၈) အောက်နှုတ်ခမ်း(သွားရည်စီးကြောင်း တလျှောက်) နှင့် မေးရိုးပေါ်က ၀က်ခြံများ။
ဟိုမုန်းမညီမျှသူတွေမှာလဲ အဲဒီလိုနေရာတွေမှာ ၀က်ခြံပေါက်တတ်ပြီး၊ သွားပိုးစား သူတွေ၊ ခံတွင်းပုပ်သူတွေ၊ ခံတွင်းရောဂါ အမျိုးမျိုးနဲ့ ဆက်စပ်နေတာဖြစ်လို့မပေါ့ ဆသင့်ပါဘူး။ နီးစပ်ရာ သွားဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးကုသမှုခံယူသင့်ပါပြီ။
(၉) လည်ပင်းတွေ နီမြန်းနေခြင်း။
အအေးမိ၊ နှာစေး စတဲ့ ရာသီဖျားနာတုပ်ကွေးပိုးတွေ ကူးစက်ခံရတဲ့အခါလည်ပင်းတွေ နီမြန်းလာတတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ အာဟာရပြည့်ဝတဲ့အစားအစာတွေ စား ရင်း၊ ကောင်းကောင်းအနားယူပါ။ နေပူထဲလုံးဝမထွက်ဘဲ၊ ရေများများသောက်ဖို့ လည်း(အထူး)လိုအပ်ပါတယ်။
3:42 AMHEALTH No comments
…ဒီcaseမှာ အမေနို့ပိ၍ အသက်ရှုမရ သေဆုံးခြင်းကို အဖြစ်နိုင်ဆုံးထင်မြင်ချက်ပေးလိုက်ပါကြောင်း …သာမန်ပြည်သူများ အသိတိုး၍ မဖြစ်ခင် သတိထားကာကွယ်နိုင်ရန် ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
2:23 AMSHANHISTORY No comments
2:07 AMHEALTH No comments
မဟော်မုန်းအီစထရိုဂျင်ထုတ်လုပ်မှုနှေး ကွေးလာလို့ ခန္ဓာကိုယ်အားအင်ယုတ်လျော့ကာ သွေးဆုံးမီးယပ်လက္ခဏာများ ပေါ်လာတယ်။ ချက်ချင်းပူ လိုက်၊ အေးလိုက်ဖြစ်ပြီး အိပ်မပျော် ခေါင်းကိုက်ကာ စိတ်တို၊ ဒေါသထွက်တာများရင် သွေးဆုံးလက္ခဏာများ ပေါ်လာတယ်ဆိုတယ်။ အရေပြားကျုံ့နိုင်၊ ဆန့်နိုင်မှု ပျောက်ကာ သတိမေ့တတ်တယ်။ အလိုမကျတာတွေ များတယ်။
Get From >>>> ဒေါက်တာ လွင်သန့်
အသုံးမကျတဲ. ဗမာပြည် အစိုးရ ၀န်ကြီး သမ္မတတွေ လို.ပြောရင် စိတ်နာမလား
1:51 AMPOLITICALSCIENCE No comments
ဲမြန်မာနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသားပေါင်း ၁၃၅မျိုးရှိပါတယ်လို. အစိုးရက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ. ညီ
အစ်ကိုယ်အချင်းချင်းတွေက အပေးအယူမမျှကြဘူး မတရားကျတော. ငြိမ်းချမ်းမူ Peace ဆိုတဲ.
ဆောင်ပုဒ် ကိုမရောက်နိုင်ကြဘူး။ ကျွန်တော်တိုꨵတိုင်းရင်းသားတွေ အပစ်ရပ်တယ်လို.တာပြောတာ
ကချင် တအောင်း ရှမ်း တွေက စစ်ဖြစ်နေတုန်းပဲ။ ဒါပာာ တစ်ယောက်နဲ. တစ်ယောက်ယုံကြည်မူ.
အားနည်းလို.ပေါ.။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မပာာလူမျိုးကြီး ဗမာအစိုးရက လူမျိုးစုငယ်ကြီးမရွေး တရားမျှ
တမူ Justice and Equalize ဖြစ်စေချင်ပါတယ် ဒါပာာ အခုလက်ရှိ ပြည်ထောင်စု ကိုအုပ်ချုပ်နေ
တာတိုင်းရင်းသားမပာုတ်ဘူး မပာာ ဗမာလူမျိုးကြီးအစိုးရ အုပ်ချုပ်တာပဲ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်. ပြည်
ထောင်စု ကြီးတကယ်ပဲ ငြိမ်းချမ်းစေချင်တယ်ဆိုရင် နှစ်ဖက်စလုံး ကတိ အတိုင်း လိုက်လုပ်ပါ။အ
ခုဖြစ်နေတဲ. Conflict တွေက သုံးနှစ်ကျော်လာခဲ.ပြီ အစိုးရနဲ. ကချင် လွတ်မြောက်ရေးတပ်မ
တော် မကြာခင် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်ရပ်မူ. Nationwide Cease Fire ကိုသွားနိုင်ကြမလားလို.
တွေးရင်း နဲစိုးရိမ်လာပါတယ်။ တကယ်တမ်း တိုင်းရင်းသားက ဒို.တာဝန်အရေးသုံးကို လိုက်နာပါ
တယ် ဒို.တာဝန်အရေးသုံးပါးကိုဖျက်စည်းစေချင်တာ အစိုးရပါ ဒီတစ်ခေါက် အစိုးရနဲ. ကချင်တပ်
တို. တွေ.ဆုံမူပာာ တစ်ခုတိုးလာတာ ကျွန်တော်မကြိုက်တာ တစ်ခုထောက်ပြချင်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်
တို. တိုင်းရင်းသား မပာာဗမာလူမျိုးကြီးအစိုးရနဲ. ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်နေတဲ.အချိန်မှာ အချင်းချင်းတွေ
နောက်ဆုံး တရုတ်က ကြားထဲက ပါဝင်ကူညီဆော
က်ရွက်ပေးချင်တယ်ဆိုတာ မမိုက်သေးပါဘူး ကျွနိုပ်တို. ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံသည် ငါတို.အချင်း
ချင်း ဗမာအစိုး၇နဲ. တိုင်းရင်းသားကြား ဘာများ အဲလောက်ထိ ပြသာနာတွေဖြစ်ပြီးတော. မဖြေ
ရှင်းနိုင်ပဲ.နဲ.ကြားထဲက တရုတ်ပါ ၀င်ဆောက်၇ွက်ပေးနေရသလဲ။ ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံသည် ငါတို.
အချင်းချင်းတွေပဲ ဘာမှ တရုတ်ကို ကြားဝင် ဖြေရှင်းပေးစရာမလိုဘူး။ တရုတ်က ပြည်ထောင်စု
တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံအပေါ်ကို နိုင်ငံရေး အပေါ်အမြတ်ထုတ်ပြီး သယံဇာတ ခိုးယူသွားတဲ.ကောင်
ပါ တရုတ်ပြည်၏ ယခုတိုးတက်မူသည် ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံ၏ ပစ္စည်း သယံဇာတ
တွေအများကြီးပါ ယခုထိ သူတို.နိုင်ငံ ထိန်ထိန်လင်းနိုင်တာ ကျွန်တော်တို.နိုင်ငံကြောင်.ပါ။ဒီ
တိုင်းရင်းသားနဲ. ဗမာအစိုးရကြား Cease Fire လုပ်တဲ.အချိန်မှာ တရုတ်ကို ကြားဝင်ပြီးမပါဝင်
ဆောက်ရွက်စေချင်ပါဘူး။ ဗမာအစိုးရ President , Ministry and General များအပေါင်းတို. ကျွန်ုပ်
တို. ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသား နိုင်ငံကို ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ. ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတာကို သူတို.က
ထိထိရောက် ရောက်မကိုင်တွယ်နိုင်ဘူး တိုင်းရင်းသားတွေကို ဘာမှ မလိုက်လျောပေးဘူး အချင်း
ချင်းတောင် ပြေလည်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတာ အာရှတိုက်မှာ အာဆီယံ ဥက္ကာငှာဖြစ်ဖို.သူ
တို.မှာ ဘာအရည်အချင်းမှ မရှိဘူး။ အာဆီယံ ဥက္ကာငှာလုပ်မယ်.ကောင်တွေက ကြားထဲက
တရုတ်အကူအညီ ကိုယူစရာမလိုဘူး။ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းအောင်မလုပ်နိုင်ပဲနဲ. အာဆီယံဥက္ကငှာ
ဆိုတာ သူတို.မှ လုပ်ဖို. အရည်အချင်း နည်းပညာမတန်ဘူး။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးတောင်မှ
အောင်အောင် မြင်မြင် မဆောက်ရွက်နိုင်သေးပဲနဲ. အာဆီယံ ဥက္ကာငှာ ထလုပ်ပြီး တောင်တရုတ်
ပင်လယ် အရေးအခင်းကို သူတို.ဘယ်လို ပါဝင် ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်မလဲ။ စဉ်းစားကြည်.ပါ။ပြည်
ပအားကို ကိုးပြီး လူမျိုးရေး Human rights ကိုချိုးဖောက် အဲဒါက အာဆီယံ ဥက္ကငှာတစ်ယောက်
၏အရည်အချင်းလား ???? ။ဒီကချင်အရေးကို သူတို.တောင်းဆိုနေတဲ. ပထမဦးဆုံးအရင်ဆုံး
Political Dialogues လုပ်ပြီးမှ သူ.ပာာသူ ဒီ Cease Fire လုပ်မယ်ဆိုတာလဲ မှန်တာပဲ ဘယ်မှာ
မှ မမှားဘူး ကချင်တွေက ဆယ်နှစ်ကျော်ပြီ အစိုးရနဲ. Cease Fire လုပ်ခဲ.တာ တကယ်တမ်းသူ
တို. အပစ်အခတ်ရပ်တဲ.အကြောင်းအရင်းက အစိုးရက Political Dialogues လုပ်မယ်လို.ပြော
လို. အပစ်ရပ်တာ အခုလဲ နောက်တစ်ခေါက် လာပြန်ပြီ ဘယ်သူက ယုံတော.မတုန် ဆယ်နှစ်
ကျော်လုံးလုံး အပစ်ရပ်လာတာ စစ်ပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ။ ကချင်အရေးကို အစိုးရအနေနဲ. တကယ်
အပြောအလဲ Transitional လုပ်တယ်ဆိုရင်တော. ကချင်အရေးကို အမြန်ဆုံးငြိမ်းအောင်ချုပ်နိုင်
ပါတယ် ဗမာမပာာလူမျိုးကြီး အစိုးရတာ မလုပ်ချင်တာ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ တကယ်လုပ်ချင်တယ်
ဆိုရင် ဒီနေ.လုပ်ရင် ဒီနေ.ဖြစ်တယ် ဘာလို.မဖြစ်နိုင်မလဲ။ ဥပမာ - တိုင်းရင်းသားနယ်မြေမှာ ထိုး
စစ်နေတဲ. အစိုးရတပ်သည် မြို.ထဲအကုန်ပြန် နောက်ဆုပ်လာခဲ. ဆုပ်တာနဲ. ချက်ချင်းပဲ အပစ်ရပ်
ဆိုတာ ဖြစ်သွားတာ။ဦးအောင်မင်းပြောတာပဲလေ တပ်မတော်ဆိုတာ ဆုပ်သည်မရှိတဲ. နိုင်ငံတ
ကာမှာ ဗမာတပ်မတော်အစိုးရက နောက်ဆုပ်တယ်ဆိုတာ ထုံးစံမရှိတဲ. ပာုတ်ပါတယ်မရှိပါဘူး။
တိုင်းရင်းသား နယ်မြေမှာ ထိုးစစ်ပြီး သေကြေသွားတာ လူပေါင်း ငါးခြောက်ထောင်တော. ထုံးစံ
ရှိပါတယ်လေ။ ဘယ်လိုနည်းနဲ.ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို. ညီအစ်ကိုယ်အချင်းချင်းတွေပဲ ကချင်အ
ရေးကို တရုတ် ၀င်ရောက် ကူညီ ဆောက်ရွက်ပေးတယ် အကြံအဥာဏ်ပေးတယ်လို.ပြောရ
လောက်အောင် ဒီဗမာပြည်က အုပ်ချုပ်နေတဲ. လူကြီးတွေက ဦးနှောက်မရှိဘူးလား အကုန်လုံး
ချီး Brain ချီးထုပ် သမားတွေပဲလား လူကြီး ဗိုလ်ကြီးတော.ဖြစ်ချင်တယ် အချဉ်ထုပ် တော.မလုပ်
ချင်ဘူးဆိုတာ မမိုက်သေးပါဘူး။ နေ.စဉ် ငပိနဲ.အချဉ်သုပ်ရော.စားပြီး နိုင်ငံတကာ အများသိ
အောင် ၀ါဒဖြန်. မပာုတ်မမှန်သတင်းတွေလုပ်။
ဦးနှောက်မရှိတဲ. ၀န်ကြီး သမ္မတတွေ အသုံးကို
မကျတာ ချီးထုပ်တွေ။ သူတို. လုပ်တဲ. ပုံက တရုတ်ရှိမှ ပြည်သူလူထုက ထမင်း စားရသလားမ
သိဘူး တရုတ်မရှိလဲ ငါတို.နိုင်ငံမီးမလင်းနိုင်ပေမဲ. မီးလင်းနိုင်ဖို. နည်းလမ်းတွေအများကြီးပဲ။
ကြည်.သွားကြည်.လာ ဒီအစိုးရ အစိမ်းကနေ ပုဆိုး ပြောင်းဝတ်တဲ. လူတွေက တရုတ်ကိုအဖေ
တော်ချင်နေသေးတယ်။ ချီးထုပ် ၀န်ကြီး အစိုးရ သမ္မတတွေ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသား ငြိမ်း
ချမ်းဖို. မလုပ်နိုင်ဘူး တရုတ်စီက အကူအညီတောင် တောင်းချင်သေးတယ်။ အကူအညီ နည်း
ပညာတော.ရမလားမသိဘူး လောလောဆယ်တော. မြန်မာပြည်က နေ ပောာင်ကောင်ကိုပို.ပေး
လိုက်တဲ. မြန်မာမိန်းခလေးတွေအတွက်တော. ပညာမရပဲနဲ. နောက်ဆုံး လေးလုံးရောင်္ဂါပါ ကပ်
လာမှာကိုပဲကြောက်တယ်။ ဒီအစိုးရက ဦးနှောင်မရှိသလား အတွေးအခေါ်မရှိသလားတော.မသိ
ဘူး ထိုင်း ဆိုရင် မြန်မာလက်အောက်တောင် နေခဲ.ဖူးတယ်။ နောက်ဆုံး ကိုယ်.လက်အောက်က
နေလွတ်မြောက်သွားပြီ မြန်မာပြည်ထက်တိုးတက်လိုက်သေးတယ်။ထိုင်းမှာ သယံဇာတထွက်
တယ်ဆိုတာ မရှိဘူး လေးလုံးရောင်္ဂါအထွက်များဆုံး ဒုတိယနေရာအာရှတိုက်ပဲ ဒါပေမဲ. မြန်မာ
ကြတော. ပစ္စည်း သစ် သယံဇတတွေအများကြီး ရှိပြီးတော. ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မကောင်းတာတွေလုပ်
ပြီး တိုးတက်နိုင်တယ်။ မြန်မာကြတော. ဘာလို.မတိုးတက်နိုင်သလဲ အစိုးရ ၀န်ကြီး စစ်တပ်တို.အ
Get From >>>>> SSDArmy
11:08 AMHEALTH No comments
ကျွန်တော့် အသက်က ၂၄ နှစ်ရှိပါပြီ။ ကျွန်တော်မှာ ခါးနာနေတာ ၁ နှစ်ကျော်လောက်ရှိပါပြီ။ တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ဆရာဝန်တွေနဲ့လဲ ကုပါတယ်ဆရာ။ ဒါပေမဲ့မပျောက်ပဲပြန်ပြန်ဖြစ်နေပါတယ်။ လုပ်ရတဲ့အလုပ်ကလဲ တစ်နေ့ကို ရှစ်နာရီလောက် မတ်တပ်ရပ်ရတာနဲ့လဲ ဆိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အခုလောလောဆယ်က့့ မှာ အလုပ်လုပ်နေတာပါ။ တစ်ခါတစ်ခါကျရင်လဲ မနာဘူးဆရာ။ အထူးသဖြင့်နာတာက ဘယ်ဘက်အခြမ်းကပါဆရာ။ ညဘက်အိပ်လို့ရှိရင် သွေးကြောလေးတွေကအထဲမှာ ဆစ်ဆစ်ဆစ်ဆစ်နဲ့ ရုန်းပြီး ကိုက်တယ်ဆရာ။ တင်ပါးခွက်ထဲကလဲ တစ်ခါတစ်ခါ နာတယ် ဆရာညာဘက်ကအဲလောက်မဟုတ်ဘူး ဘယ်ဘက်တစ်ခြမ်းကပဲ။ အခန့်မသင့်ရင်လေတွေဘာတွေ ဖြတ်တတ်ပါသလား။ ဘာဆေးသောက်ရင်အဆင်ပြေမလဲဆိုတာပါ သိပါရစေဆရာ။
• လူတိုင်းလိုလိုတချိန်မှာ ဖြစ်ဘူးကြတယ်။ သူ့ဖါသူပျောက်သွားတာများတယ်။ မပျောက်ဘူးဆိုရင် ထိရောက်တဲ့ ကုသနည်းတွေ ရှိတယ်။
• Dull ache ထုံပြင်းပြင်းနာတာနဲ့ Stabbing or shooting sensation ထိုးတာခံရသလိုနာတယ်။ ခါးမတ်အောင် နေလို့ မရဖြစ်တယ်။ အားကစားလုပ်ရင်း၊ အလုပ်လုပ်ရင်းရုတ်တရက် နာလာတာရှိတယ်။ ၃ ရက်နေလို့မှ မပျောက်ရင် ဆရာဝန်ပြပါ။ ၃ လနေလို့မှ မပျောက်ရင် နာတာရှည်လို့ သတ်မှတ်တယ်။
• အသက် ၃ဝ ကျော်လောက်မှာအများဆုံးစဖြစ်ဘူးတတ်တယ်။ ဒိထက် အသက် ကြီးလာလေလေ ဖြစ်နိုင်ခြေများလေလေ။ ကိုယ်အလေးချိန် ပိုလာတာ၊ လှုတ်ရှားမှု နည်းလာတာတွေကြောင့်ဖြစ်မယ်။
• ဆီးသွား-ဝမ်းသွားတာအထိထိခိုက်လာရင်၊ အောက်ပိုင်းမှာအားနည်းလာရင်၊ ဖျားလာရင်၊ ချောင်းဆိုးလိုက်ချိန်မှာပိုနာတာဖြစ်ရင်၊ ဆီးသွားလို့ ပိုနာရင် အရေးကြီးတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• အလေးအပင်မရာကနေဖြစ်တာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်းကနေဖြစ်တာမျိုးက Muscle Strain ကြွက်သားနာတာခေါ်တယ်။
• နောက်တမျိုးကခါးရိုးဆစ်ကအရွတ်ရွေ့တာ Sciatica ခေါ်တယ်။ နောက်ဟာမျိုးဆိုရင် Sciatic nerve (ဆိုင်ယားတစ်) အာရုံကြောတလျှောက် လိုက်နာမယ်။ တင်ပါး-ပေါင်-ခြေသလုံးအထိနာမယ်။
• အလုပ်လုပ်ရာမှာအလေးမရတာ၊ ဆွဲရတာမျိုးတွေက Twists the spine ခါးကိုလိမ်သလိုလုပ်ရရင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ထိုင်လုပ်နေရတာ ကြာသူတွေလဲနာနိုင်တယ်။
• Gym or Golf course အားကစားနည်းတွေကနေလဲနာတယ်။
• ခါးရိုးမကြီးဆိုတာအရိုးလေးတွေ တခုနဲ့တခုထပ်နေတယ်။ အရိုးတခုနဲ့တခုကြားမှာအရိုးနုပြားလေးတွေရှိတယ်။ အရိုးလောက် မသန်မာလို့ အသက်ကြီးသူတွေ အားမကောင်းတော့ဘူး။ ခါးကိုထိခိုက်မိရင် စုပ်ပြဲသွားနိုင်တယ်။ ကျွံသွားနိုင်တယ်။ နောက်ကိုကျွံရင် သူ့နောက်ကအာရုံကြောမကြီးကိုသွားဖိစေနိုင်တယ်။ Herniated Disc ခေါ်တယ်။ အလွန်နာမယ်။
• Spinal stenosis ခါးရိုးနေရာကျဉ်းတဲ့ရောဂါမျိုးကနေလဲအာရုံကြောကိုဖိစေပြီးနာစေနိုင်တယ်။ Spondylitis ရောဂါကနေလဲနာနိုင်တယ်။ Fibromyalgia ရောဂါကနေလဲနာနိုင်တယ်။
1. Posture အနေအထိုင် ပုံစံ၊ ခါးမတ်ထိုင်ပါ။ ခါးအမှီပါစေရမယ်။ ပခုံးပါ နားစရာရှိသင့်တယ်။ ခြေထောက်ကလဲနားစေနိုင်ရမယ်။ မတ်တပ်ရပ်ရင် ကိုယ်အလေးချိန်ကိုခြေနှစ်ဖက်လုံးပေါ်မှာ မျှနေပါစေ။
2. Muscle strain ကြောင့်နာတာမျိုးကသူ့အလိုလိုကောင်းမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ Heating pad or warm baths အပူကပ်ပေးတာလုပ်နိုင်တယ်။
3. Bed Rest ခါးနာတာကိုနားခိုင်းမလား။ ခါးနာသူတွေကအိပ်ရာထဲကမထချင်ကြဘူး။ ဒါပေမဲ့ Muscle strain ကြောင့်သာဆိုရင် လုပ်နေကြအလုပ်ကိုစောနိုင်သမျှစောပြီး ပြန်လုပ်သင့်တယ်။ အိပ်ရာထဲမှာ ၁-၂ ရက် နေသူတွေကခါးနာပိုဆိုးစေနိုင်တယ်။
4. Yoga (ယောဂ) နည်းကို ၃ လနေလို့မှ မသက်သာသေးသူတွေ ၃ လ လုပ်သင့်တယ်။
5. Spinal Manipulation အထူးကုဆရာဝန်တွေကတချို့ကိုလုပ်ပေးတယ်။
6. Massage Therapy နှိပ်နည်းကိုနာတာရှည် ခါးနာသူတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်။ ဒါလဲ ၂ လလောက် အချိန်ယူတယ်။
7. Acupuncture အပ်စိုက်ကုသနည်းထိရောက်မှုကလေ့လာမှုတွေမှာမတူကြတာတွေ့ရတယ်။ Simulated acupuncture နည်းရော Real acupuncture with needles နည်းရောလုပ်နတယ်။
8. Acetaminophen, Ibuprofen, or Naproxen စားဆေးတွေနဲ့ Pain-relieving creams လိမ်းဆေးတွေ သုံးတယ်။ လိုသေးရင် ပိုပြင်းတဲ့ဆေးပေးမယ်။
9. Steroid Injections (စတီရွိုက်) ထိုးဆေးလဲတချို့ကိုထိုးပေးတယ်။
11. Physical Therapy (ဖီဇီယို) ကုသနည်းမှာ Stretches, Strength exercises, and Low-impact cardio နည်းတွေသုံးတယ်။
12. ခါးကို Flexion and extension exercises ခါးကိုအကွေး-အဆန့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးတယ်။
• ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။ အတိအကျ မဖြစ်ရပါဘူးလို့ အာမခံနိုင်တာမရှိပါ။
- မ,စရာရှိရင် ခြေနဲ့သာမပါ။ ခါးနဲ့ မမပါနဲ့။ အလုပ်လုပ်ရာအနေအထိုင်မှာခါးကိုသက်တောင့်သက်သာအမြဲရှိပါစေ။
ခေါင်းအုံးမြင့်တာမသင့်ပါ။ အိပ်ရာခင်းမာမာမှာသာလဲလျောင်းပါ၊ အိပ်ပါ။ မွေ့ယာမသင့်ပါ။ ကြိုးကုတင်၊ Dream bed (ဒရင်းမ်ဘက်)၊ စပရင်ကုတင် မသင့်ပါ။ ထိုင်ရင် ပေါင်ကအောက်ခံမှာထိနေ၊ ကျောကနောက်မှီနဲ့ထိနေရမယ်။ ဖင်ထိုင်ခုံမှာမထိုင်ပါနဲ့။ ကြမ်းပေါ် တင်ပါးချ မထိုင်ပါနဲ့။ ပက်လက်ကုလားထိုင်၊ (ဆိုဖါ) အိတာမှာမထိုင်ပါနဲ့။ မျက်နှာသစ်၊ လက်ဆေး၊ ပန်းကန်ဆေးလုပ်ရာမှာကြွေခွက်၊ စားပွဲ၊ ခုံကိုယ်နဲ့အနေတော်ပါစေ။ နည်းနည်းလေးမှ မကုံးရစေပါနဲ့။ ရေအိမ်သာဒူးကို ၉ဝ ဒီဂရီကွေးနိုင်တဲ့ အမျိုးအစားသုံးပါ။
Get From >>> Dr. တင့်ဆွေ
10:34 AMHEALTH No comments
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့် ခန်းလုပ်နေစဉ် ဒါမှမဟုတ် ချွေးထွက် များတဲ့
အလုပ် လုပ်နေစဉ်မှာ ကြွက်တက်ခြင်းမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါက ရေဓာတ်ခန်း ခြောက်ခြင်း(Dehydration) ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြင်းထန်စွာ အားကစား ပြုလုပ်ခြင်း၊ အား သွန်ခွန်စိုက် အလုပ်လုပ်ခြင်းတို့ သတ္တုဓာတ်များ ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေပါ တယ်။
အထူးသဖြင့် ပိုတက်ဆီယမ် နှင့်ဆိုဒီယမ်သတ္တုဓာတ်တွေ ဆုံးရှုံး မှုကြောင့် ကြွက်တက်ခြင်းဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ ကြွက်တက်ခြင်းကို ကာ ကွယ်ဖို့ နေ့စဉ် ရေ ၆ ခွက်မှ ၈ ခွက်အထိ သောက်ပါ။ အချိန်ကြာ တဲ့ အားကစားလေ့ကျင့်မှုများ ဒါမှမဟုတ် ပြိုင်ပွဲများမှာ မကြာခဏ နားပြီး ရေသောက်ပါ။
သတ္တုဓာတ် များ ဟန်ချက်မညီလို့ ကြွက်တက် တယ်လို့ သံသယရှိပါရင် အား ကစားသမားတွေ သောက်တဲ့ Carbohydrate Electrolyte ဓာတ်ဆားရည်ကို သောက်ကြည့်ပါ။ သကြားပါဝင်မှု နည်းတဲ့ ဓာတ်ဆား ရည်ကို ရွေးချယ်ပါ။
အပူချိန်မြင့်မား နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ သကြားက ဗိုက်အောင့်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဆားခဲများကို ဘယ်တော့မှ မစားပါ နှင့်။ ယင်းဆားတွေက သတ္တုဓာတ် ဆုံးရှုံးမှုကို ပိုမိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
9:06 AMSHANHISTORY No comments
Get From >>>> http://sanooaung.wordpress.com/2008/01/23/the-golden-days-of-the-great-shan-empire-vi/
6:43 AMSHANHISTORY No comments
12:27 PMSHANFOODS No comments
These above three steps are preparing for doing Shan noodle which look like salad
By - Sae Hark
10:26 AMOTHERKNOWLEDGE No comments
10:11 AMSHANFOODS No comments
Pitching themselves as “the first Shan-style fine dining restaurant in Myanmar”, prices at Shan Yoe Yar start from about K1500 and rise up to about K16,000-K20,000 on average foramain.
Shan Too Fu
Havingaquick look at the breakfast menu – which is served from 6am until 4pm –aclassic bowl of Shan noodles starts at K2200. Considering most local restaurants charge from about K500abowl, it’s fair to say the prices may beabit steeper than what locals are used to.
That said, the décor at the restaurant is immaculate. Open since May this year, Shan Yoe Yar isabeautifully renovated teak mansion in Lanmadaw township. Away from the more touristy areas, most of the customers have so far been Korean and Japanese tour groups and the more affluent Myanmar, said the restaurant director.
The space downstairs is open-plan dining while upstairs, private rooms can be hired out for those who can affordabit more privacy.
I opted to sit downstairs with the masses, choosing deep-fried tofu (K1500) and Shan-style sour pork sashimi (K2000). I wasn’t entirely what to expect from the sour pork, especially if it was raw, so I asked it to be grilled – just in case the sourness wasn’t from the fermentation process. The tofu came withalight tamarind dipping sauce that whetted my taste buds and the sour pork surprisingly soft and moist to chew, not at all tough as I had been expecting.
Shan Tradition Fish
I also chose Shan-style mashed potatoes (K2000), that wereabit more gloopy than your average mash, but way more exciting having had fresh herbs tossed through it. The waiter suggested I try the traditional beef salad, but when I saw on the menu that it was mostly made up of grilled beef organs, I instead opted for the Par Sout, herb-stuffed catfish steamed grilled in banana leaves (K18,000). The pounded leek root salad (K6000) was the most outstanding dish for, with the zesty flavours of lemongrass and lemon juice providing the necessary “zing” to compliment the heavier dishes.
I was stuffed, but saw my througharound of complimentary dessert – steamed pumpkin in rose-water infused and sweetened milk. I had never had tried the combination before, but it worked well.
Hopefully Shan Yoe Yar can maintain its quality but the main thing I would suggest is for them to put upasign outside in English. So far, they haveabright neon sign in Myanmar –abit hard to work out for an average traveller wandering by Shan Yoe Yar